Xildhibano ka tirsan Aqalka Sare ee Dalka oo gaarey K/Afrika – Radio Muqdisho
Xildhibano ka tirsan Aqalka Sare ee Dalka oo gaarey K/Afrika
Xildhibaanno ka socda Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa gaarey gaarey magaalada Cape Town ee dalka koofur Afrika,waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Cape Town kusoo dhaweeyay jaaliyadda soomaaliyeed ee magaaladaasi.
Jaaliyadda ayaa si weyn farxad soo dhaweyn ah ugu muujisay senatorada,Abdi Axmad Dhuxulow (dhegdheer) oo garoonka diyaaradaha ee magaalada cape town kula hadlay jaaliyadda kadib marki diyaaraddii sidday ay soo caga dhigatay ayaa dhankood u muujiyay sida uu ugu faraxsanyahay la kulanka shacabkiisa,maadaama ay tahay markii ugu horeysay ee masuuliyiin kasocota Aqlka sare ee Dowlada Fedaraalka soomaaliya ay yimaadaan magaaladaan cape town.
Ali Calasow, Abuukar Bunka iyo Mahad Cumar Cabbdi oo ka mid ahaay odayaashi ka qeyb galay soo dhaweynata ayaa lahadlay warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in ay ku faraxsanyihiin in xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay soo booqdaan.
Ugu dambeyntii Senator Abdi Axmed (Dhuxulow) ayaa u mahadceliyay shacabkii soo dhaweeyay si koobanna warbixin uga siiyay waxyaabaha socdaalkiisu ku aadanyahay,wuxuuna xusay in ujeedkooda ugu weyn uu yahay inay u kuurgalaan xaaladda Soomaalida kunool halkaasi.
Dowladda Lubnaan oo ku baaqday cunaqabatayn la saaro Mareykanka
Maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo lagu dilay Bay